SAFFRON PEOPLE'S MOVEMENT: ကျားကစားကြသူများ
ယခုဆောင်းပါးကို ၂၀၀၈ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ၂၇ရက်က တကြီမ် ဖေါ်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
ကျားလို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ တောထဲက Tiger လို့ ခေါ်တဲ့ ကျားကြီးကို ပြေးမမြင် လိုက်ကြပါနဲ့ဦး။ ကျွန်တော် ပြောမှာက အကွက်ရွှေ့ပြီး ကစားရတဲ့ “ကျား”၊ ဆရာကျားဘညိမ်းကို “ကျားဘညိမ်း” ဆိုတဲ့ နာမည်တလုံး ရစေခဲ့တဲ့ ကျားကစားနည်း အကြောင်းပါ။
ကျားကစား ကြတာတော့ အားလုံးပဲ မြင်ဘူးကြမယ် ထင်ပါတယ်။ စစ်တုရင်လို့ ခေါ်တဲ့ချက် ကစားနည်းလို ကမ္ဘာကျော် မဟုတ်ပေမယ့် မြန်မာ ပရိတ်သတ်နဲ့ဆို ပိုရင်းနှီးပါတယ်။ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်မှာ၊ ကွမ်းယာဆိုင် ဘေးမှာ၊ ဆိုက်ကားဂိတ်နားမှာ၊ ရပ်ကွက်ထဲက လူငယ်တွေ စုတဲ့နေရာမှာ နေရာစုံမှာ အလွယ်တကူ တွေနိုင်တဲ့ အင်မတန်ကို အများနဲ့ နီးစပ်တဲ့ ကစားနည်းလို့ ဆိုချင်ပါတယ်။ လူတော်တော် များများလဲ ကစားတတ် ကြ ပါတယ်။
အခု ကျွန်တော်ပြောချင်တာ အဲဒီကစားနည်းကို ကစားကြတဲ့ လူတွေရဲ့ အကြောင်း တစေ့တစောင်းလေး မြင်သမျှ ကိုပါ။ သဘောသဘာဝ လေးကိုတော့ နည်းနည်းလောက် ရှင်းပြ ပါရစေ။ စစ်တုရင် ကစားနည်းနဲ့ ကျားကစားနည်းဟာ တဖက်ကို အနိုင်ရအောင် အကွက်ဆင် ရွှေ့ရတာက လွဲရင် တော်တော် ခြားနားပါတယ်။ စစ်တုရင်မှာ အစကတည်းက ဘုရင်၊ဘုရင်မ၊ စစ်ကဲ၊ ဘုန်းကြီး၊ ပွန်းစသည်ဖြင့် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်က ရှိပြီး သားပါ။ တိုက်ရတာကိုက ဘုရင်ကျရင် တဖက်လူမှာ ဘယ်နှစ်ကောင်ပဲ ကျန်ကျန် ပွဲပြီးသွားပါပြီ။
ကျားမှာတော့ အစမှာ အားလုံးဟာ ကျားကောင် ပါဝါတူတွေသာ ဖြစ်ပြီး နောက်မှ ကင်းပေါက်တဲ့ အကောင်က ပါဝါတက်ပြီး အဆင့်ပြောင်း သွားတာပါ။ အနိုင်အရှုံးကိုလဲ နောက်ဆုံးတကောင် ကျန်တဲ့အထိ အဆုံးအဖြတ် ပေးပါတယ်။ အဲ့ဒီ တဖက် ဆယ့်နှစ်ကောင် ကစားရတဲ့ ကျားမှာပဲ သူများ အကောင်တွေကို နိုင်အောင် ကစားရတဲ့ ပုံမှန်ကစားနည်း အပြင်၊ အလွယ် ကစားနိုင်တဲ့ ကိုယ့်ကျားတွေကို အတင်းထိုးကျွေးပြီး အရင်အကောင်ကုန်တဲ့ လူက နိုင်တဲ့ ကစားနည်း တမျိုးလဲ ရှိပါသေးတယ်။ ကလေးတွေ တော်တော်များများ ကစားလေ့ရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်ကတော့ နိုင်အောင် ကစားတဲ့နည်းကို ကျနိုင်(ကျားနိုင်)၊ကုန်အောင် ကစားတဲ့နည်းကို ကျကုန်(ကျားကုန်)လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းကဆို ရှုံးထွက်ကစားနည်းနဲ့ တနေကုန် ကစားကြတာပါ။
ဥပမာ ကျွန်တော်က ကျားခုံပိုင်သူဆိုယင် ကျွန်တော့်ကို သရေကစားနိုင်ရုံနဲ့ ဖယ်ခိုင်းလို့ မရပဲ အနိုင်ရအောင် ကစားနိုင်တဲ့ သူရှိမှ ဖယ်ပေးရမှာပါ။
ဘာမဟုတ်တဲ့ ကစားနည်း အကြောင်းကို ဇာချဲ့နေတယ်လို့ အထင်မစောပါနဲ့ဦး ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော့်မှာ ဥပမာ ခိုင်းနှိုင်းပြစရာလေး ရှိနေလို့ပါ။ တကယ်လို့များ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရေးသမား တတွေဟာ ကျားပွဲတခု ကစားနေကြတာ ဆိုပါစို့။ နအဖဟာ တရားနည်းနဲ့ ပဲရရ၊ မတရားနည်းနဲ့ပဲ ရရ မြန်မာနိုင်ငံကို အုပ်ချုပ် နေနိုင်တဲ့ လက်ရှိ အခြေအနေနဲ့ သို့မဟုတ် ကျားခုံဟာ သူတို့ လက်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ပြိုင်ဘက် ဖြစ်နေတယ် ဆိုကြပါစို့။
(၁)ကျွန်တော်တို့ ရှုံးရင် ထွက်ပေးရမယ်။
(၃)ပါဝါတူလို့ သရေပဲ ပွဲပြီးမသွားအောင် ရွှေ့နေတယ် ထားဦး အချိန်မရွေး သူ့ကျားခုံကို ပြန်သိမ်း သွားနိုင်ခွင့် ရှိတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ကျားခုံက သူ့လက်ထဲမှာ ဖြစ်နေတယ်။
အဲဒီ အခြေခံလေးကိုပဲ တဆင့်တက်ပြီး စဉ်းစား ကြည့်မယ်ဆိုယင် ကျွန်တော့်မှာ မေးခွန်းထုတ်စရာ အချက် အလက် အချို့ ရှိလာပါတယ်။ မေးခွန်းတခုချင်းနဲ့ ရှင်းလင်းချက် တွဲသွားချင်ပါတယ်။
(၁)ကျွန်တော်တို့ဟာ ကျားကုန် ကစားနေတာလား၊ ကျားနိုင် ကစားနေတာလား ဆိုတာပါ။
ဒီမေးခွန်းအတွက် ရှင်းလင်းချက် မပေးခင် ကျွန်တော်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ခံစားချက်အချို့ကို တင်ပြလိုပါ သေးတယ်။ အဲဒါကတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ စစ်အာဏာရှင် စနစ်ကို ဖြုတ်ချပြီး ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကို တကယ် ကူးပြောင်းဖို့ ကြိုးစားနေတာ ဟုတ်မဟုတ် ကိုယ့်ကိုကိုယ် မေးခွန်းထုတ်ကြဖို့ပါ။ ထူးချွန်အောင်မြင်တဲ့ ကျောင်းသားဖြစ်ချင်ရင် တကယ် စာကြိုးစားရမယ် ။ ဒီမိုကရေစီနဲ့ အခြေခံ လူ့အခွင့်အရေး တွေကို လိုချင်ရင် ကိုယ်တိုင်လဲ ဒီမိုကရေစီ ကို တကယ် ယုံကြည်ပြီး ဒီမိုကရေစီ နည်းလမ်းကျကျ လက်ခံ ကျင့်သုံးရမယ်။ ပါးစပ်က ဘုရားဘုရား လက်က ကားယားကားယား လုပ်လို့တော့ မရပါဘူး။ဒီမိုကရေစီ လိုချင်တယ်လို့လဲ ပြောသေးတယ်၊ ဒီမိုကရေစီ နည်းလမ်း ကျကျ မျှမျှတတ ဝေဖန်တာတောင် လက်မခံနိုင်ဘူး ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော် ဆက်ဆွေးနွေးစရာ မရှိတော့ပါဘူး။
အခု ဆက်ဆွေးနွေးမယ့် အချက်တွေဟာ ဒီမိုကရေစီ နည်းလမ်းကျကျ တကယ် ကျင့်သုံးချင်တဲ့သူတွေ အတွက်ပဲ ရည်ရွယ်ပါတယ်။ အခုခေါင်းစဉ်မှာ ပြောခဲ့သလို ကင်းပေါက်နေတဲ့ သူတွေကကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ကျားတွေကို ကျွေးပြီး ကျားကုန် ကစားနေတာလား၊ ဒါမှမဟုတ် ကျားနိုင်ကစားနေတာလား ဆိုတာ အရေးတကြီး ပြန်သုံးသပ် ဖို့လိုပါတယ်။ ကျားနိုင်ကစားနေတာ ဆိုရင်ကျားကွက် ပေါ်မှာရှိတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ဘယ်ကျားကောင် မဆိုရဲ့ တန်ဖိုးဟာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရပါဘူး။ သူကလဲ တချိန်မှာ ကင်းပေါက်ပြီး ပါဝါ တက်လာနိုင်တဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ သူဖြစ်နိုင်လို့ပါပဲ။
တနည်းဆိုရင် တချိန်တုန်းက အားလုံးဟာ ဘဝတူရဲဘော်တွေပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်က ကျားတကောင်နဲ့ တန်ဖိုးတူ လဲရမယ်ဆိုရင်တောင် ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဆိုရင် အင်မတန် မလိုအပ်ပဲ မလဲချင်ပါဘူး။ခင်ဗျားက ကျားကုန် ကစား နေတယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်အနေနဲ့ ဘာမှပြောစရာ မရှိတော့ပါဘူး။ဒါပေမယ့် တခုရှိတာက နောက်ဆုံး ကျရင် ခင်ဗျားကိုယ် ခင်ဗျားလဲ ထိုးကျွေးရမယ် ဆိုတာပါပဲ။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်မှာ ပါဝါတခုခု ရှိခဲ့မယ် ဆိုယင်တော့ ဘဝတူတွေကို ချကျွေးနေတဲ့ ကျားကုန်ကစားပွဲ ခင်ဗျား ကစားဖို့ ဘယ်တော့မှ ခွင့်ပြုမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ ဘက်က ကျား တကောင် တိုင်းဟာ အဖိုးအနဂ္ဂ ထိုက်တန်နေတယ် ဆိုတာပါပဲ။
(၂)ကျွန်တော်တို့ သရေ ကစားနေတာလား?
ကျွန်တော် အထက်မှာ ပြောခဲ့သလိုပါပဲ လက်ရှိ အခြေအနေမှာ သရေ ကစားနေတာဟာ ပါဝါတူ ရတယ်လို့ ကျွန်တော် လုံးဝ လက်မခံနိုင်ပါဘူး။ ခင်ဗျားကတော့ ကင်းပေါက်သွားလို့ ခင်ဗျားသွားချင်ရာ ခင်ဗျား ရွှေ့ချင်ရာ အကွက်ကို ကင်းပီပီ ရွှေ့လို့ ရနေပြီး ခင်ဗျား ကင်းပေါက်အောင် လုပ်ပေးခဲ့ရတဲ့ အရင်တုန်းက ခင်ဗျားနဲ့ ဘဝတူ ကျားတွေကတော့ ဒေါင့်ကပ်တဲ့ အကောင်ကကပ်၊ လတ်တလော အစားခံရတဲ့ အကောင်က အစားခံရ၊ ခင်ဗျားကစားနေတဲ့ ကျားခုံကြီးဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ မြန်မာ ပြည်သူလူထု တွေကတော့ ခင်ဗျားကစားနေတဲ့ ပွဲရှည်ရင် ရှည်သလောက် ဆင်းရဲဒုက္ခတွေ အမျိုးမျိုး ရောက်နေတယ်ဆိုတာ မေ့မထားစေချင်ပါဘူး။ ဒီကြားထဲမှာ နအဖက ကျပ်မပြည့်တဲ့ ခပ်ဆိုးဆိုး ကလေးကြီးလို သူ့ကျားခုံကြီး ပြန်သိမ်းသွားလိုက်၊ စိတ်လိုရင် ဒါမှမဟုတ် လူကြီးတွေကို တိုင်လိုက်ရင် ပြန်ထုတ်လာ လိုက်နဲ့။
မြန်မာနိုင်ငံက ပြည်သူတွေ အတွက်ဆိုရင် တရက်၊ အသွင်ကူးပြောင်းမှု စောရင် တရက် လူ့ငရဲက လွတ်မြောက် ရသလိုပါပဲ။ ဇာတ်ထဲက လူပြက်တွေလို ပြောရရင်တော့ စောစောသေရင် စောစော အိပ်ရတယ် ပေါ့ဗျာ။ ဘာမှမလုပ်ရင် ဘာမှမဖြစ်ဘူး ဘာမှ ဒီ့ထက်ပို မဆိုးလာ နိုင်ဘူးလို့ ဆိုပေမယ့် အခုလက်ရှိ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အခြေအနေထက် ပိုဆိုးနိုင်တဲ့ အခြေအနေတော့ မရှိတော့ဘူးလို့ ပြည်သူတဦး တယောက်က ပြောလာခဲ့ရင် ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လို ဖြေရှင်း ကြမလဲ၊ သေချာတာ တခုကတော့ သရေကစားပြီး အချိန်ဆွဲနေတဲ့ နည်းလမ်းဟာ အကျိုး သက်ရောက်မှု ရှိတဲ့ နည်းလမ်း မဟုတ်ဘူး ဆိုတာပါ။
(၃)ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လို အနိုင်ကစားကြမလဲ?
အခြေအနေတွေ အားလုံးက အနိုင်မရရင် ကျွန်တော်တို့ အသာမရနိုင်ဘူးဆိုတာ ပြဆို နေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လို အနိုင်ကစားကြမလဲ။ လက်ရှိကစားနေတဲ့ PLAYER တွေ ဘာကြောင့် အသာရအောင် အနိုင်ရအောင် မကစားနိုင်ကြသလဲ ဆိုတာ စစ်တမ်းထုတ်ဖို့ လိုလာပါတယ်။
ကြုံဖူးတဲ့ လူတွေဆိုရင် စစ်တုရင် ဝိုင်းတွေ ကျားကစားတဲ့ ဝိုင်းတွေမှာ ဘေးမပြောရ ဆိုပြီး စည်းကမ်းချက် ထုတ် ထားတာ တွေ့ဖူးကြမှာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ အားလုံး လက်ခံတဲ့ အယူအဆ တရပ်က ဘေးက ကြည့်နေတဲ့ သူတွေဟာ ကိုယ်တိုင် ကစားနေတဲ့ သူတွေထက် အချို့အကွက် ကလေးတွေမှာ ပိုပြီး မြင်နိုင်လို့ပါပဲ။ ကစား နေတဲ့ လူတွေထက် ပိုတော်တယ်လို့ ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘေးကလူက နှစ်ဖက်မျှ ကြည့်နေမိလို့ သဘော သဘာဝအရ အကွက်ပိုမြင်တာပါ။ သူဘာသာသူ ဝင်ကစားရင် လက်ရှိ လူထက်ညံ့ချင် ညံ့နေမှာပါ။ အဲဒါကြောင့် ဘေးမပြောရဆိုတဲ့ စည်းကမ်း ထုတ်ထားတာပါ။
ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်တခု ပြောချင်တာက
-န.အ.ဖဟာ တရားမျှတစွာ အခုကစားပွဲကို ကစားနေတယ်လို့များ ကျွန်တော်တို့ ဘက်က PLAYERတွေ ယူဆ ထားပါသလား?
-ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အားကစား စိတ်ဓါတ်သာ အဓိကမို့ အနိုင်အရှုံးကို အဓိကထားစရာ မလိုဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ ဘက်က PLAYERတွေ ယူဆထားပါသလား?
ဆိုတာ ရှင်းလင်း ကွဲပြားစေချင်တာပါ။
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ပြောရရင်တော့ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆို ကျွန်တော်တို့ အနိုင်ရဖို့ လိုတယ် ဆိုတာပါပဲ။ ဘာဖြစ် လို့လဲ ဆိုတော့ အဲဒီ အရှုံးအနိုင်ဟာ သန်းငါးဆယ်နီးပါးသော မြန်မာပြည်သူ လူထုတွေရဲ့ ဘဝကို ကိုယ်စား ပြု နေလို့ပါပဲ။ အချစ်နဲ့ စစ်မှာကျတော့ မတရားဘူး ဆိုတာ မရှိဘူးလို့ ပြောကြတယ်။ သန်းငါးဆယ်သော မြန်မာ ပြည်သူ လူထုနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စမှာ ဘယ်လို ကိစ္စက မတရားဘူးလို့ ခင်ဗျားတို့ ယူဆ နေကြပါသလဲ?
န.အ.ဖအတွက် မျှတမှုမရှိဘူးလို့ ပြောချင်တဲ့ သူတွေ ပြောကြပါစေ။ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေ အတွက် လွတ် မြောက်ဖို့ ကိစ္စမှာ၊ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးတွေ ပြည့်ဝစွာ ခံစားနိုင်ဖို့ ဖန်တည်းပေးဖို့ ကိစ္စမှာ တကမ္ဘာလုံးက မီးဟုန်းဟုန်း ထအောင် ကန့်ကွက်နေတောင်မှ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူလူထု အတွက်ဆို မဖြစ်မနေ အနိုင်ရအောင် လုပ်ရမယ်လို့ ကျွန်တော်ကတော့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီလိုလား သူအားလုံး ထောက်ခံနေသားပဲဗျာ။
ကျွန်တော်သာ ဆိုရင်တော့ ဘေးကပဲ ဝင်ပြောပြော၊ ကျွန်တော့်လက်ကို ဝင်ချုပ်ပြီးတော့ပဲ ရွှေ့ရွှေ့ အဲဒီ ရွှေ့ကွက်ဟာ မြန်မာပြည်သူ လူထုတွေအတွက် အကောင်းဆုံးနဲ့ အကျိုးအရှိဆုံး ရွှေ့ကွက်ဆိုရင် ဝမ်းမြောက် ဝမ်းသာစွာနဲ့ ရွှေ့ပစ်လိုက်မှာ ပါပဲဗျာ။
ကျွန်တော်တို့ဘက်က အကွက်ရွှေ့နေတဲ့ အဖိုးတန် PLAYERတွေ အားလုံး မြန်မာပြည်ရဲ့ သန်းငါးဆယ် နီးပါး သော ပြည်သူလူထုတွေကို၊ ကိုယ်နဲ့ ဘဝတူဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ တိုက်ပွဲဝင်ဖေါ်ဝင်ဘက် ရဲဘော်ရဲဘက် ကျားကောင်တွေ ကို တန်ဖိုးထားတတ်တဲ့ အကောင်းဆုံး PLAYERတွေ ဖြစ်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်။
ဘန်ကောက်မြို့ ကုန်တိုက်ကြီးတစ်ခုတွင် မြန်မာနှင့်ေ...
မြန်မာ ရွေပြောင်း အလုပ်သမားများ စုပေါင်း နေထိုင်ရ...
အလုပ်သမား ပတ်စပို့လုပ်မည်ဟု လုပ်ငန်းရှင်ကခေါ်ယူစည်း...